Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2019
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Aogositra, 2019
Mialoha fifidianana ao Mozambika, niadian-kevitra ny “vaovao faikany” sy ny loza aterany
Mozambika 28 Aogositra 2019
Tsy voaresaka firy any Mozambika ny olan'ny vaovao faikany sy ny fanodikodinam-baovao mandritra ny fifidianana.
Tiorkia 26 Aogositra 2019
Miatrika fiampangana ny olo-malaza Tiorka iray ao amin'ny Twitter noho ny fandrisihana ny fandraisana zava-mahadomelina ary niteraka adihevitra momba ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera.
Andiana lahatsary fanadihadiana maro manasongadina ny ady atrehan'ireo vehivavy mpikatroka any Vietnam
Azia Atsinanana 22 Aogositra 2019
"Ao anatin'ny fitondrana jadona iray, tsy misy manana fahalalahana, indrindra fa ny vehivavy, ambony be raha oharina amin'ny lehilahy ny tsy fahampian'ny fahalalahan'izy ireo."
Afrika Mainty 15 Aogositra 2019
Nanoratra tsikera amin'ny fitantanan-draharaha mamoritra entin'ny filoha tanzaniana John Magufuli ilay mpanora-baovao mahaleotena Erick Kabendera. Omaly ny manampahefana niampanga azy amin'ny heloka ara-toekarena, saingy nilaza ny mpitsikera fa fanoratam-baovao ihany no hany "helony".
Navotsotry UAE ilay mpikatroka Osama al-Najjar rehefa nogadraina nandritra ny 5 taona raha tokony navotsotra 2 taona talohan'izao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Aogositra 2019
Noafahan'ny manampahefana ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra (UAE) ilay mpikatroka sady gadra politika Osama al-Najjar taorian'ny nanagadrana azy nandritra ny dimy taona mahery.
Mandrahona ny hanakana an'ireo karatra SIM tsy fanta-tompo ny mpandrindra fifandraisandavitra ao Mozambika
Mozambika 12 Aogositra 2019
Ny 28 Jona 2019, ao anatin'ny 10 andro no amelan'ny Tomponandraikitry ny Fifandraisana ao Mozambika an'ireo mpandraharaha mba hanaovana ho ara-dalàna ny momba an'ireo rehetra mpampiasa azy ireo.
Israely: Tia sy mankahala an'i Yonit Levi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Aogositra 2019
Yonit Levi no vehivavy mpanolotra vaovao be mpitia ao amin'ny Channel 2 any Israely. Tato anatin'ny andro vitsivitsy anefa dia lasa voahilika tao amin'ny tontolon'ny bilaogy izy noho ny fanehoan-keviny momba ny krizy misy ankehitriny ao Gaza, izay heverina fa mangoraka an'ireo Palestiniana.
Frantsay noterena hiala tsiny noho ny nanaovany lahatsary mandrabiraby ny fitondra-miaramila Thailandey
Azia Atsinanana 07 Aogositra 2019
"Tsy mira fankahalana firenena iray mihitsy ny fitsikerana ny governemanta sy ny fitondrana. Tiako i Thailandy, fa ny hany tsy tiako dia ny mpanao didijadona sy ny fanonganam-panjakana ataon'ny miaramila."
Togo : Nandresy ny fahalalahan’ny fampahalalam-baovao, saingy mitohy ny fifandonana
Afrika Mainty 06 Aogositra 2019
Faly tamin’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana tamin’ny fandàvana ny lalàna izay nametra ny fahalalahan’ny fampahalalam-baovao ireo mpanao gazety avy ao Togo, firenena iray any Afrika Andrefana.
Tatitry ny mpisera : Felahan'i Shina ireo orinasa mpanome tolotra aterineto, ny resaka vetaveta no lazainy fa antony
Shina 05 Aogositra 2019
“’Raha tsy misy filaminana ao amin'ny aterineto, ahoana no hanananareo fahalalahana ao?” Ny taratasy fampahafantarana tamin'ity herinandro ity dia miresaka ireo kiana atao amn'ny Aterineto malalaka ao Shina, sy ny fanentanana iray feno famoronana entina hitakiana ny hisian'ny aterineto haingam-pandeha any Bolivia.